Puntland :Gudoomiyihii maxkamadda oo xilka laga qaaday | Midnimo Online | Somalia News and Media
Home Somali News Puntland :Gudoomiyihii maxkamadda oo xilka laga qaaday
Puntland :Gudoomiyihii maxkamadda oo xilka laga qaaday
Gudoomiyihii Maxkamada ciidamada qalabka sida ee Puntland Col. C/fataax Xaaji Aadan ayaa xilkii laga qaaday, kadib wareegto ka soo baxday xafiiska Madaxweynaha Puntland oo xilkaasi looga qaaday.
Xil ka qaadista Gudoomiyihii maxkamada ciidamada Puntland ayaa soo baxday 03-dii Bishan aan ku guda jirno, waxaana la ogeysiiyay dhamaan dadka ay khuseyso.
Gudoomiyihii Maxkamada ciidamada Puntland oo xil ka qaadistaasi ka hadlay, ayaa sheegay inuu soo dhaweynaayo tallaabada xilka looga qaaday, wuxuuna intaasi raaciyay tani inay qayb ka tahay isbedelk lagu sameynaayo Hay’adaha Garsoorka Puntland.
“Isku Shaan-dhayntaas waxay saamaysay dhammaan maxkamadihii, waxaana kuwii Darajada Kowaad waxaa loo raray maxkamadda sare, Kuwii Maxkamadda Mudug joogay waxaa loo raray gobolka Nugal, Kuwii Nugal joogay waxaa la keenay Bari, kuwii Bari joogay waxaa la geeyay Mudug, waana qayb kamid ah habka shaqada dowladda.” Ayuu Kornel Cabdifataax oo Waraysi siinayay Radio Garowe.
Mar wax laga way diiyey in sababta xilka looga qaaday inay tahay inay siidaayeen rag ku eedaysnaa Shabaab iyo Daacish ayuu gaashaanka u daruuray waxaana uu sheegay maxkamaduhu inay u shaqeeyaan si wanaagsan.
“Taas ma oran karo sababtoo ah ma jirto ruux nala ka ruqseeyay, balse waxaa wax shaqada dowladda ka mid ah in la isku shaandheeyo saraakiisha maxkamadaha.” Ayuu yiri Cafdifataax.
Col. C/fataax Xaaji Aadan Gudoomiyihii Maxkamada Ciidamada Qalabka Sida ee Puntland